Notsapainay ny Energy eReader Pro, ebook an'ny Energy Sistem miaraka amin'ny Android | Androidsis
Notsapainay ny Energy eReader Pro, ebook an'ny Energy Sistem miaraka amin'ny Android
Google | | Fitaovana Android, hevitra
Isan'andro izahay mihaona Android amin'ny fitaovana bebe kokoa. Ny rafitra fiasan'ny Google Miala tsikelikely ny taniny mahazatra (finday avo lenta sy takelaka) hipetraka amin'ny fitaovana vaovao, toy ny fiara, famantaranandro maranitra, ebook, ... Androany dia holazainay aminao ny iray amin'ireo ebook farany nahavoa ny tsena. Momba an'io Energy eReader Pro, boky elektronika natombok'ilay orinasa Espaniôla Rafitra angovo. En Google Nanararaotra nisedra azy izahay ary, noho izany, tianay hambara aminao ny fahatsapana nomeny anay.
1 Unboxing ny Energy eReader Pro
2 Energy eReader Pro endri-javatra
Unboxing ny Energy eReader Pro
Boaty Energy eReader Pro
Jereo aloha ny Energy eReader Pro
Fanesorana ny atin'ny Energy eReader Pro
Angovo boaty Energy eReader Pro
Toy ny mahazatra ny vokatra amin'ny Rafitra angovo, ny fampisehoana ny Energy eReader Pro tena karakaraina tsara izy io. Raha vantany vao manokatra ny boaty izahay dia mahita ny ebooks voaaro amin'ny plastika mba tsy hisy fahasimbana ny efijery boky elektronika mandra-pahatongantsika ao an-tranonay. Ao ambanin'ny vokatra no ahitantsika boaty roa.
Ao amin'ny kely indrindra dia misy tariby micro USB ahafahantsika maka vola amin'ny Energy eReader Pro ary asio boky ao. Fonosana velcro ny tariby mba tsy hivoahany, antsipiriany iray mampiseho fa miorina amin'ny zava-drehetra ny orinasa. Etsy ankilany, ao amin'ilay boaty lehibe dia manana boky torolalana kely momba ny torolàlana isika Rafitra angovo, bokikely misy fampahalalana momba ny vokatra hafa an'ny orinasa sy lamba iray hahafahanay manadio ny efijery amin'ny ebook.
Energy eReader Pro endri-javatra
El Energy eReader Pro dia e-boky izay miasa miaraka Android 4.2. Ny efijery fanoratana elektronika 6-inch dia manana vahaolana 758 x 1024 teboka / 212 dpi sy 16 ambaratonga volondavenona. Rehefa avy nanandrana aho dia mila milaza aminao aho fa tsy nahatsikaritra fahasamihafana misy eo amin'ny famakiana an-taratasy sy ny fanaovana izany ao amin'ny ebook of Rafitra angovo. Mahafinaritra tokoa ny famakiana, tsy mijaly ny fahitana ary kely loatra ny tananao, satria milanja 220 grama fotsiny.
Ny efijery mikasika dia tsy hanome anao taratra na taratra ary miasa tanteraka izy io, amin'ny alàlan'ny fitendrena azy fotsiny dia mandeha amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa isika nefa tsy tsikaritray. Azonao atao ny manamboatra ny vakiteny mba hisafidianana ireo endritsoratra 35 sy ireo habe 20 misy ary mampiditra tsoratadidy na mamorona fanamarihana mora foana. Ny ebook koa dia mampiditra bokotra hamelombelona haingana ny efijery raha misy sary na lahatsoratra teo aloha tavela.
Raha iray amin'ireo mamaky kely alohan'ny hatory miaraka aminy ianao Energy eReader Pro Azonao atao izany tsy misy olana satria ny efijery dia mamela antsika handrindra ny haavon'ny jiro, izay tsy hanelingelina antsika rehefa mamaky. Araka ny hitanao amin'ny iray amin'ireo sary nalainay, tsy manana ny fahatsapana mamaky amin'ny efijery elektronika ianao, toy ny ataonao rehefa mamaky amin'ny finday avo lenta na takelaka amin'ny alina ianao.
Mihantona ny angovo eReader Pro
Energy eReader Pro avy ao aoriana
Fampiharana angovo eReader Pro
Mizaha ny Internet amin'ny alàlan'ny Energy eReader Pro
Etsy ankilany, ny e-book of Rafitra angovo Izy io dia manana processeur ARM Cortex A9 1.0Ghz dual-core, bateria lithium 2800 mAh ary misy fahatsiarovana anatiny 8 GB, azo ovaina hatramin'ny 64 GB miaraka amin'ny karatra microSD. Na izany aza, raha tsy te hamaky be ianao (ary tsy mahomby aho) dia mety tsy ilaina ho anao ny karatra microSD. Mba hanomezana hevitra anao, ny Energy eReader Pro mitondra boky sy gazety literatiora 1.500 5 ho fanomezana ary ny fahatsiarovana anatiny mbola misy miaraka amin'izy ireo dia mihoatra ny XNUMX GB.
Teboka iray hafa manohana Energy eReader Pro izany ve, amin'ny alàlan'ny Android Amin'ny maha OS antsika, afaka mankafy ireo rindranasa marobe izay miaraka amin'ny rafitra fiasan'ny Google. Ohatra, afaka mihaino mozika amin'ny headphone isika mandritra ny famakiana, fandefasana mailaka, fidirana Google Drive efa Gmail na manaova an-tsoratra ao amin'ny notepad. Ny ebook an'ny Rafitra angovo Mampiditra navigateur koa izy io, ahafahantsika miditra amin'ny pejin-tranonkala tsy misy olana. Na eo aza ny fisehoan'ny tranonkala mainty sy fotsy, toy ny lozika amin'ity karazana fitaovana ity, dia mandeha tsara ny fitetezana.
Araka ny hitanao, ny Energy eReader Pro Boky elektronika iray tena feno izy io, izay ankoatran'ny mamaky dia afaka manao zavatra maro hafa isika. Afaka mividy ao amin'ny magazay ianao Rafitra angovo ho an'ny € 119, vidiny izay tsy ratsy raha jerena ny habetsaky ny fiasa ananany sy ny fiasa ananany.
Raha mbola tsy resy lahatra ianao dia afaka miloka amin'ny Amazon eReader foana satria, ankoatr'izay, mora be izany mametraka Google Play amin'ny Kindle Fire ary mankafy fampiharana maimaimpoana an'arivony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Notsapainay ny Energy eReader Pro, ebook an'ny Energy Sistem miaraka amin'ny Android
JOHN † MAHECHA dia hoy izy:
ary nisy olona nampiasa azy io nandritra ny 6 volana mahery, nanao ahoana ny niainanao?
Valiny amin'i JOHN † MAHECHA
Miguel Garcia Gimenez dia hoy izy:
Ny marina dia tsy nahazo nampiasa azy io nandritra ny fotoana ela isika, fa ny fahatsapana voalohany dia tena tsara. Mila milaza aho fa tsy mitady fahafaham-po ny mijery forum any amin'ny seha-kevitra ankapobeny, fa heveriko fa noho ny anarana Energy ao amin'ilay marika no tena antony. Noho ny famaritana azy dia toa tsy safidy ratsy io, fa angamba raha mihady kely ianao dia mety hisy tsara kokoa noho ny vidiny mitovy na kely kokoa. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra sy arahaba! :)
Valiny tamin'i Miguel García Giménez
Ny marina dia tsy afaka mampiasa azy io loatra isika. Ny azoko lazaina aminao dia ny hevitry ny mpampiasa mandritra ny fotoana maharitra dia tsy dia mahafa-po. Ny ankamaroany dia amin'ny famakiana haingana fotsiny ny marika Energy noho ny valiny ratsy voaangona. Fa tena mino aho fa afaka manome valiny tsara amin'ny voalohany, na dia mety ho tsara kokoa aminao aza ny mijery maodely hafa amin'ny voalohany. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra sy arahaba! :)
Miguel.Teleco dia hoy izy:
Ny marina dia tsy afaka mampiasa azy io loatra isika. Ny azoko lazaina aminao dia ny hevitry ny mpampiasa mandritra ny fotoana maharitra dia tsy dia mahafa-po.
Ny ankamaroany dia amin'ny famakiana haingana fotsiny ny marika Energy noho ny valiny ratsy voaangona. Saingy tena mieritreritra aho fa amin'ny voalohany dia afaka manome valiny tsara izany, na dia mety ho tsara kokoa aminao aza ny mijery modely hafa amin'ny voalohany.
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra sy arahaba! :)
Valio i Miguel.Teleco
Ny amboaranao dia ny fiadianao tsara indrindra hamongorana ny fahavalo an-jatony amin'ny Tap Titans lehibe
Ireo kintana mihoatra ny natiora an'ny Pressing Catch ao amin'ny WWE Immortals dia misy amin'ny Android izao